Ngaphandle kwezo golisa ezaziqwalaselwa kodwa azizange zingene (ngeli xesha)
ULorna Ochoa , uDavis Love III , iMeg Mallon kunye no-Ian Woosnam ehamba phambili kwiHlabathi yeHlabathi yeHlabathi yeHlabathi yeFama ka-2017, eyabhengezwa ngo-Oktobha 18, 2016.
Abo bathathu, kunye nomlobi kunye nomsasazo uHenry Longhurst, baya kuhanjelwa kwiHolo kwintlanganiso eNew York ngoSeptemba 26, 2017, ngexesha leeMongameli zeNdebe yeeNdebe.
Okuthakazelisayo, i-Ochoa ne-Mallon ayingayi kukhethwa ngeli xesha ngaphantsi kweendlela zokuqala zokungena kwiHolo ezisekelwe kwi-LPGA Hall Hall Fame system-Ochoa kuba akazange ahlangabezane ne-10-year-on-tour; I-Mallon ngenxa yokuba wawa nje emfutshane kweemfuno zamanqaku.
Kodwa iHlabathi yeHlabathi yeHlabathi yeGama yeGama yayeka ukumelana neprogram ye-LPGA xa iHolo yatshintshisa iikhrayitheriya zayo zonyulo kwaye iqhuba iminyaka emibini edlulileyo.
(Bobabini i-Ochoa kunye neMallon baya kugqitywa kwiHolo phantsi komsebenzi omdala, kodwa bekuya kufuneka balinde iKomidi yeVeterans ukuba bavote.)
U-Ochoa, Uthando, iMallon, Woosnam, kunye ne-Longhurst banyulwe yiKhomishoni yoKhetho loKhetho lweHlabathi yeHlabathi yeHlabathi, ilungu lelungu eli-16 elijongene neengxelo zokugqibela ezi-16.
Abo bagqityiweyo abaye baqwalaselwa kodwa abazange (okwangoku) bafumane ukungena ba:
UPeggy Kirk Bell
U-Longhurst wayengomnye wabalobi abakhulu kwimbali yegalufa, ebhala isigodlo segolfu kwiLondon yeSonto iLondon iminyaka emine, kunye ne-golf yokusasaza kunye ne-BBC iminyaka engaphezu kwamashumi amabini.
Nanku ukujonga okufutshane kwiigolisa ezine kwiCandelo lika-2017:
Uthando lwafika kwi- PGA Tour ngexesha lokusila komsila we-persimmon, kwaye igama lakhe elidlulileyo lalinjengomqhubi omkhulu kwi-tee. Xa wayebiza oko emva koko, wafumana ukulawula okungakumbi, waqala ukuwina.
Uthando lwawuthola amaxesha angama-21 kwi-PGA Tour, kubandakanywa enye enkulu, i- 1997 ye-PGA Championship , kunye ne-Winners Championship Championship.
Ukunqoba kwakhe kokuqala kokutyelela kwaba ngowama-1987 kunye neyona nto yakutshanje kwimizuzu eyi-51 ngo-2015.
Uthando lwalo lwalumele i-United States kumaqela angama-15 e-national: njengomdlali kwiqela le-Walker Cup ye-1985, kwiinqela ze-Cup Presidents Cup kunye namaqela ayisithupha e- Ryder Cup ; kunye nomphathi wee-2012 kunye ne-2016 ze-Ryder Cup.
I-Mallon yayingomnye wabagadi begalufu abaphezulu kwiLPGA Tour ngexesha lama-1990s ukuya kuma-2000s, enye yee-eras ezikhuphisana kakhulu. Uphumelele ngamaxesha angama-18, kubandakanywa amanqoba amane ophando lobuntshatsheli: u-1991 LPGA Championship kunye no-2000 we-Maurier Classic, kunye nezityeba zakhe, i- US Women's Open Open ngo-1991 no-2004.
I-Mallon idlala kwiinqela ezisibhozo zeqela le-USA USA Solheim kwaye ligcine iqela le-2013. Kwakhona ungumdlali wokuqala we-LPGA ukuthumela amanqaku angama-60 kwisiganeko sokutyelela (kodwa kwenzeka emva kweminyaka emibini emva kokuba u-Annika Sorenstam atshaya 59).
I-Ochoa ye-LPGA ye-Tour career yayifutshane kodwa i-jam-packed. WayenguRokie woMnyaka ngo-2003 kodwa washiya umhlalaphantsi emva kwexesha le-2010 eneminyaka engama-28.
Ngelo xesha elifutshane, i-Ochoa iphumelele ngamaxesha angama-27, kubandakanywa iimbumba ezimbini. Wayengumdlali weLPGA weNyaka ngezihlandlo ezine, umkhokeli wemali kathathu, ukulinganisa amaxesha amane.
U-Ochoa wadibana neLPGA Hall of Fame efunekayo kwinkqubo yeephupha ezingama-27 ngo-2008, emfanelekela kwiHlabathi yeHlabathi yeHlabathi yeGama ngexesha lo.
Nangona kunjalo, ngenxa yokuba engadlala iminyaka eyi-10 kwindlela yokutyelela, wayengenakufaneleka, njengoko kuphawulwe ngentla, ukuchongwa. Ekubeni i-WGHOF ayisasebenzisi inkqubo ye-LPGA, iye waba nelungelo lokuvota-kwaye kwakungenalo-brainer ukwenza njalo.
I-Woosnam yayingomnye wabagadi begalufu baseYurophu abaye bavela ngasekupheleni kweminyaka yee-1970 nakwama-1980 kwaye bajika umgca we-Ryder Cup ukusuka ekubuseni kwe-Amerika ukuya ekulinganeni kunye (ekugqibeleni) ukulawula kweYurophu.
I-Woosnam yayingumdlali weNombolo 1 kwi-rankings yehlabathi kangangokuba phantse unyaka ekuqaleni kwawo-1990, emva kokuphumelela kwi- Masters ka - 1991 . WayenguMdlali we-Europe Tour of the Year ngo-1987 no-1990. Wayenamanqaku angama-29 kwi-Europe Tour.
I-Woosnam idlalwe kwiQembu leYurophu kwiinqununu ezisibhozo ze-Ryder Cups, zonke zivela ngo-1983 ukuya ku-1997, kwaye zigcinwe ngexesha le-2006 Ryder Cup.
I-Intanethi yoLungiselelo ngeSpanish
I-10+ Izinto Ezozenzayo Ngaphambi kokufaka isicelo kwiKholeji ye-Inthanethi